နော့စ်ဒဏ္ဍာရီ - ဝီကီပီးဒီးယား
နော့စ်ဒဏ္ဍာရီ (အင်္ဂလိပ်: Norse mythology) သည် နော့စ်လူမျိုးများ (သို့) မြောက်ဂျာမန်နစ်လူမျိုးများ၏ ဒဏ္ဍာရီ အစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်၍ နော့စ်ရိုးရာဘာသာတရား (Norse paganism) ကို အခြေခံ၍ စကန်ဒီနေးဗီးယားဒေသတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာခံယူမှုဖြစ်ပေါ်သည်အထိ ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ကာ ခေတ်သစ်ကာလ၏ စကန်ဒီနေးဗီးယား ရိုးရာအစဉ်လာပုံပြင်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂျာမန်နစ်ဒဏ္ဍာရီ၏ မြောက်ဘက်ဆုံးကျသော အခွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်သည့် နော့စ်ဒဏ္ဍာရီတွင် နတ်ဘုရား၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ သူရဲကောင်း အမျိုးမျိုးတို့အကြောင်း ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များပါဝင်၍ ထိုဖော်ပြထားသည့်သူများသည် ရှေးကာလက နတ်၊ နတ်ဘုရားကိုးကွယ်သောခေတ် (pagan period) မတိုင်မီနှင့် ထိုခေတ်အပြီးမှ အလယ်ခေတ်လက်ရေးမူများ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ ရိုးရာအစဉ်အလာများ အပါအဝင် များစွာသောရင်းမြစ်များမှ ဆင်းသက်လာကြသည်။
စကန်ဒီနေးဗီးယန်း ရှေ့ဖြစ်ဟောအမျိုးသမီးတစ်ဦးက လှံကိုင်ဆောင်ထားသော အိုးဒင်နတ်ဘုရားအား ၎င်း၏အတိတ်နှင့် အနာဂတ်အကြောင်းပြောစဉ်။ "အိုးဒင်နှင့် Völva ခေါ် ရှေ့ဖြစ်ဟောအမျိုးသမီး" ပုံ၊ Lorenz Frølich ၏လက်ရာ။ (၁၈၉၅)
ထိုရင်းမြစ်စာပေများ၌ အမျိုးမျိုးသော နတ်ဘုရားများကို ဖော်ပြထားရာ 'တူ'လက်နက်ကိုင်စွဲထား၍ လူ့လောကကိုစောင့်ရှောက်သော မိုးကြိုးနတ်ဘုရား 'သော်' (သော်သည် မဆုတ်မနစ်ဖြင့် ရန်သူများကိုချေမှုန်းသူ)၊ မျက်လုံးတစ်ဖက်တည်းသာရှိ၍ ကျီးနက်နှစ်ကောင် တစ်ဖက်တစ်ချက်မှခစားသော အိုးဒင်နတ်ဘုရား (နေရာဒေသအသီးသီးမှ အသိပညာများကို ပါးနပ်စွာလေ့လာလိုက်စားသူနှင့် လူ့လောက၌ ရှေးဟောင်း(ဂျာမန်နစ်)စာ (အက္ခရာ) (runic alphabet) ကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်သူ)၊ လှပတင့်တယ်၍ မှော်အစွမ်းရှိကာ ငှက်မွှေးတောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားသော ဖရွိုင်းယာနတ်ဘုရားမ (သေပြီးသောသူများကိုလက်ခံရွေးချယ်ရန် တိုက်ပွဲသို့လာရောက်သူ)၊ အငြှိုးကြီးမားကာ နှင်းလျောစီးလေ့ရှိသော စကားသီနတ်ဘုရားမ (ပင်လယ်ကမ်းခြေများထက် ဆောင်းရာသီတောင်တန်းများမှ ဝံပုလွေအသံကို ပို၍နှစ်သက်ခုံမင်သူ)၊ စွမ်းအားကြီးသော နျော့သယာနတ်ဘုရား (ပင်လယ်ပြင်နှင့် မီးကိုတည်ငြိမ်စေသူ၊ ချမ်းသာဓနနှင့် နယ်မြေများ ချီးမြှင့်သူ)၊ ဖရဲ့ယာနတ်ဘုရား (ရာသီဥတုနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးများနှင့်ပတ်သက်၍ လူ့လောကအတွက် ငြိမ်းချမ်းမှု၊ သာယာမှု ယူဆောင်ပေးသူ)၊ အိုင်ဒွန်နတ်ဘုရားမ (ထာဝရနုပျိုမှုကိုပေးစွမ်းသော ပန်းသီးကို ထိန်းသိမ်းသူ)၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်သော ဟိမ်းဒါလာနတ်ဘုရားမ (မိခင်ကိုးဦးမှမွေးဖွားလာသူ၊ မြက်ပင်များကိုကြီးထွားစေသူ၊ ရွှေရောင်သွားရှိသူ၊ မြည်ဟီးသံဟိန်းသော ခရာကိုပိုင်ဆိုင်သူ)၊ ယော့တ်နာမျိုးနွယ် လိုကီနတ်ဘုရား (နတ်ဘုရားမ ဖရစ်၏ လှပသောသားတော် ဘော်လ်သရာ နှင့် အခြားနတ်ဘုရားများစွာကို သေစေ၍ နတ်ဘုရားများထံသို့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှု ဆောင်ယူလာသူ) စသဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။
ရှင်သန်လျက် ရှိသော ဒဏ္ဍာရီအများစုသည် နတ်ဘုရားတို့၏ အကျပ်အတည်းဒုက္ခများ၊ ၎င်းတို့နှင့် အခြားသူများ(ဥပမာ လူသားများ)၏ အချင်းချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ (သို့) ရန်သူများ (သို့) ချစ်ခင်ရသူများ (သို့) မိတ်ဆွေများ ဖြစ်နိုင်သော ယော့တ်နာမျိုးနွယ်များ (jötnar) [မှတ်စု ၁] စသည်များကို ဗဟိုပြုရေးဖွဲ့ထားကြသည်။ နော့စ်ဒဏ္ဍာရီ၌ပါရှိသော စကြဝဠာသဘောတရားတွင် အစ်ဂ်ဒြာစီ (Yggdrasil) ဟုခေါ်သော စကြာဝဠာဗဟိုချက်၌တည်သော သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိ၍ ထိုသစ်ပင်ကို လောက(ကမ္ဘာ)ကိုးခုမှ ဝန်းရံထားသည်။ စကြာဝဠာသဘောတရား၏ အခြေခံအခြင်းရာများ၊ အချိန်ကာလတစ်ခုခြင်းစီကို နတ်ဘုရားများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် ခိုင်းနှိုင်းတင်စားကြသည်။ ဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာဒဏ္ဍာရီပုံစံမျိုးစုံကို ပြန်လည်ပြောဆိုကြရာ လောကအစ ပုဂ္ဂိုလ် "အီးမာ" (အီးမီယာ) ၏ အသားမှ ကမ္ဘာကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ပထမဆုံးလူသားနှစ်ဦးမှာ အားစ်ခ် နှင့် အမ်ဘလာ (Ask and Embla) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဤကမ္ဘာလောကကြီးများသည် နတ်ဘုရားများနှင့် ၎င်းတို့၏ရန်သူများကြား ကြီးကြယ်သောတိုက်ပွဲများဖြစ်သည့် 'ရက်နရော့' (Ragnarök - ရဲ့ဂ်နရော့ခ်) တိုက်ပွဲများစွာပြီးနောက် ပြန်လည်မွေးဖွားမည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် ပြန်လည်မွေးဖွားရန်အလို့ငှာ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ၌ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သော နတ်ဘုရားများတွေ့ဆုံကြ၍ မြေကြီးသည် မြေဆီဩဇာကောင်း၍ စိမ်းစိုလာမည်။ လူသားနှစ်ဦးသည် ကမ္ဘာလောကကို လူဦးရေတိုးပွားစေမည်။
နော့စ်ဒဏ္ဍာရီသည် အဓိကကျသော (ကျမ်း)စာများအား ဥရောပ ပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းတို့က အာရုံစိုက်လာသောအချိန် (၁၇)ရာစုမှစ၍ ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု အကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်ဒဏ္ဍာရီလေ့လာမှုနှင့် သမိုင်းဝင်ဘာသာဗေဒနည်းလမ်းအားဖြင့် ပညာရှင်များသည် ရှေးကျလှသော အင်ဒို-ဥရောပ[မှတ်စု ၂]ဒဏ္ဍာရီများကဲ့သို ဂျာမန်နစ်ဒဏ္ဍာရီ၏ အခြေခံကြောင်းရာများကို ခွဲခြားဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ခေတ်သစ်ကာလအတွင်း ရိုမန့်တစ်ဝါဒ [မှတ်စု ၃]ဗိုက်ကင်းတို့အကြောင်းတစ်ဖန်ထုတ်ဖော်မှုသည် ဤဒဏ္ဍာရီကြောင်းရာများနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို ပြန်လည်နိုးကြားစေခဲ့သည်။ ယခုအခါ၌ နော့စ်ဒဏ္ဍာရီအတွက် ကိုးကားရည်ညွှန်းချက်များစွာကို ခေတ်ပေါ် လူကြိုက်များသည့် ယဉ်ကျေးမှုများ၌ တွေ့ရှိနိုင်ပေသည်။ ဂျာမန်နစ် ခေတ်သစ်ရိုးရာဘာသာတရား(Germanic Neopaganism) ကိုထိန်းသိမ်းလိုက်နာသူများကြား ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆက်စပ် (ကျမ်း)စာတွင် ဤဒဏ္ဍာရီများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်သည်။
၃.၁ နတ်ဘုရားများနှင့် အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များ
၃.၄ ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု
နော့စ်လူမျိုးများ၏ သမိုင်းဝင်ရိုးရာဘာသာကို ပုံမှန်အားဖြင့် "နော့စ်ဒဏ္ဍာရီ" အဖြစ် ညွှန်းဆိုဖော်ပြကြသည်။ အချို့သော စာပေများတွင် စကန်ဒီနေးဗီးယန်းဒဏ္ဍာရီ မြောက်ဂျာမန်နစ်ဒဏ္ဍာရီ (သို့) နောဒစ်ဒဏ္ဍာရီ အဖြစ်လည်း သုံးစွဲမှုများရှိခဲ့ကြ၏။
ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ Rök အရပ် ၌တည်ရှိသော ရားခ် ရှေးဟောင်းကျောက်ထွင်းစာ (Ög 136)၊ ဤကျောက်စာသည်နော့စ်ဒဏ္ဍာရီအတွက် အမျိုးမျိုးသော ကိုးကားမှုများဖြစ်စေသည်။ Younger Futhark ခေါ် စကန်ဒီနေးဗီးယန်းရှေးဟောင်းစာတစ်မျိုးဖြစ်၏။
နော့စ်ဒဏ္ဍာရီသည် မူလအားဖြင့် ခေတ်ပေါ် စကန်ဒီနေးဗီးယားဘာသာစကားများ၏ မူလအရင်းခံဖြစ်သော၊ ဥရောပအလယ်ခေတ်ကာလများ၌ စကန်ဒီနေးဗီးယားဒေသခံများပြောဆိုကြသော မြောက်ပိုင်းဂျာမန်နစ်ဘာသာတစ်ခုဖြစ်သည့် ရှေးဟောင်းနော့စ် ဒေသယိဘာသာစကားများတွင် တရားဝင်ပါဝင်မှုရှိသည်။ ဤရှေးဟောင်းနော့စ်စာ အများစုကို အိုက်စလန်တွင် ဖန်တီးခဲ့ကြရာ၌ ခရစ်ယာန်အယူမတိုင်မီခေတ် ထိုကျွန်းနေသူများ၏ ပြောရိုးစကား အစဉ်အလာများမှ အရင်းခံကာ ထိုစကားရပ်များကို လက်ရေးမူများဖြင့် စုဆောင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းများသည် မူလအားဖြင့် (၁၃)ရာစုတွင်ဖြစ်၏။ ထိုစာသားများသည် စနောရီ စတားလဆန်၏ (၁၃)ရာစုက ရေးဖွဲ့ခဲ့သော အက်ဒါ စကားပြေ၊ (၁၃)ရာစုကပင် အမည်မသိရဘဲ စုစည်းပေါင်းစပ်ထားသော ရှေးကျသည့် ရိုးရာအစဉ်လာကြောင်းရာများမှ ကဗျာအစုအဝေးဖြစ်သော အက်ဒါ ကဗျာလင်္ကာ(များ) တို့တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
စကောဒစ်ကဗျာများ (စကော့ဒ် ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော ကဗျာဆရာများ ရေးဖွဲ့သီကုံးထားသော ရှေးဟောင်းနော့စ် ရိုးရာကဗျာ လင်္ကာများ) ရေးသားထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် စကားပြေလက်စွဲစာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ် အက်ဒါ စကားပြေကို ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့်ရေးဖွဲ့ခြင်း၊ နှုတ်မှုဆိုင်ရာလက်ဆင့်ကမ်းလာခြင်းတို့ကြောင့် စကောဒစ်ကဗျာ လင်္ကာများတွင် အသံတူအစ အက္ခရာသုံးရေးဖွဲ့သော ကဗျာများ (alliterative verse)၊ (တင်စားမှုသဘောဖြင့်) စကားလုံး ပေါင်းစပ်အဓိပ္ပာယ်များ (kenning) နှင့် အသံကာရံယူပုံအမျိုးမျိုး (နရီ/မတြာ)ကိုပါဝင်စေ၍ အသုံးချထား၏။ အက်ဒါ စကားပြေသည် ခရစ်ယာန်အယူဝါဒပြောင်းလဲခြင်း မတိုင်မီနှင် ထို့ခေတ်အပြီး တွင်ပေါ်ပေါက်သော ကဗျာဆရာများ၏ မြောက်များစွာသော နမူနာလက်ရာများကို ကိုယ်စားပြုနိုင်၍ မကြာခဏဆိုသလို အက်ဒါ ကဗျာလင်္ကာတွင်ပါရှိသော ကဗျာများကို ပြန်လည်ညွှန်းဆိုနိုင်သည်။ အက်ဒါ ကဗျာလင်္ကာ၌ ပါဝင်မှုအများစုမှာ ကဗျာများဖြစ်၍ ဇာတ်လမ်းဆိုင်ရာ စကားပြေအချို့ထည့်သွင်းထားမှုလည်းရှိသည်။ ဤကဗျာလင်္ကာကြီး၌ (တင်စားမှုသဘောဖြင့်) စကားလုံး ပေါင်းစပ်အဓိပ္ပာယ်များ အသုံးပြုမှုရှား၏။ စကောဒစ်ကဗျာလင်္ကာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤအက်ဒါ ကဗျာလင်္ကာမှာ တန်ဆာဆင်ချယ်မှုန်းမှု အတော်ပင်မရှိဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
အက်ဒါ စကားပြေသည် ယူဟီးမရဝါဒ အစိတ်အပိုင်းများကို အလေးပေးဖော်ပြထားရာ ထို၌ နတ်ဘုရားများ၊ တန်ခိုးစွမ်းအားရှိသူများသည် အတိတ်တစ်ချိန်မှ အမှန်တကယ်ရှိ၍ မှော်ပညာကဲ့သို့ အစွမ်းထက်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် တင်စားခိုင်နှိုင်းကြပြီး အဆုံးတွင်တော့ နတ်အဖြစ်ဖန်တီးကြပြီး ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည် (သို့) ခရစ်ယာန်ဒဏ္ဍာရီနည်းလမ်းအားဖြင့် မိစ္ဆာဟုသတ်မှတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် ခိုင်းနှိုင်းတင်စားခဲ့ကြသည့် ဖြစ်စဉ်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ (၁၃)ရာစုက စနောရီ ရေးဖွဲ့ထားသော "ဟိမ်းစ်ခရင်လာ" (Heimskringla -ရှေးဟောင်းနော့စ်ဘုရင်များ၏ အတွဲလိုက် ဇာတ်လမ်းပုံပြင်ရှည်) နှင့် (၁၂)ရာစုက လက်တင်ဘာသာဖြင့် ဆက်ခ်ဆို ဂရမ်မာ တိကပ်စ် ရေးဖွဲ့သည့် ဂက်စ်တာ ဒန်နောရမ် (ဒိန်းမတ်လူမျိုးတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ) စသည့်တို့ကဲ့သို့သော စာအုပ်များမှ စာများသည် ယူဟီးမရဝါဒဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးမှုများသော လက်ရာများပင်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ ဆားဂါ (sagas -ရှေးဟောင်းနော့စ်အကြောင်းများကို အလယ်ခေတ်စကားပြေဖြင့် ရေးသားကြသော သူရဲကောင်းပုံပြင်ဇာတ်လမ်းရှည်များ)ဟုခေါ်သော များစွာသောစာများက နောက်ထပ်သတင်းအချက်လက်များကို ထောက်ပံ့ပေးကြသည်။ ဤဇာတ်လမ်းပုံပြင်ရှည်စာစုများတွင် အိုက်စလန်ဇာတ်လမ်းရှည်များမှသည် ဟ(န်)ဘုရင် အထစ်လာ/အထီလာ (Attila the Hun) ကဲ့သို့သော သမိုင်ဝင်စာဖွဲ့ရမည့်သူများအကြောင်းဖော်ပြထားသော (ဥရောပတစ်ခွင်) လူအများနယ်မြေရွှေ့ပြောင်းကျက်စားသောကာလ(Migration period)မှ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ အထိ ပါဝင်ကြသည်။ ဝတ္ထုပစ္စည်းများ နှင့် အထိမ်းအမှတ်များ၊ ဥပမာအနေဖြင့် ရားခ် ရှေးဟောင်းကျောက်ထွင်းစာ (Rök Runestone) နှင့် ကဗစ်နာဘီ အဆောင်လက်ဖွဲ့ (Kvinneby amulet) တို့တွင် ရှေးဟောင်းဂျာမန်နစ်စာ(runic alphabet) ထွင်းထုရေးသားထားမှုများ ပါဝင်သည်။ ထိုရှေးဟောင်ဂျာမန်နစ်အက္ခရာ/စာ သည် ဂျာမန်နစ်လူမျိုးတို့၏ တိုင်းရင်းစာဖြစ်၍ ဤထွင်းထုထားမှုများက နော့စ်ဒဏ္ဍာရီမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖြစ်အပျက်အကြောင်းများကို ဖော်ပြထားသည်။
ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများမှ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများကို နော့စ်ဒဏ္ဍာရီမှ အကြောင်းအရာများ၏ ဖော်ကျူးချက်များအဖြစ် အနက်ထုတ်ဖော်ပြန်ဆိုနိုင်သည်။ ဥပမာအနေဖြင့် ရိုးရာဘာသာအရ မြှုပ်နှံထားသောသင်္ချိုင်းများ၌ တွေ့ရှိခဲ့ရသော "သော်နတ်ဘုရား"၏ တူလက်နက် (မြောနစ်ယာ - Mjölnir) နှင့်ပတ်သက်သော အဆောင်လက်ဖွဲ့များ၊ ဗဲလ်ကရီ (ဗဲလ်ကိုင်းရီး) (သို့) ဒီးစ်ဆီးယာ ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည့် ခပ်သေးသေး 'ငွေ'ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော လူအမျိုးသမီးပုံလေးများ စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဗဲလ်ကရီ (သို့) ဒီးစ်ဆီးယာ တို့သည် စစ်ပွဲ၊ ကံကြမ္မာ (သို့) ရှေးဘိုးဘေးတို့၏ ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြ၏။ သမိုင်းဝင်ဘာသာဗေဒ နှင့် ဒဏ္ဍာရီနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု နည်းလမ်းများအားဖြင့် ဂျာမန်နစ်ဒဏ္ဍာရီ၏ အခြားရှင်းလင်းမှန်ကန်သည့် သက်သေရှိသော ဒဏ္ဍာရီအခွဲများ (ဥပမာ - အစောဆုံးအဆင့်အနေအထားရှိသော ဂျာမန်ဘာသာစကား( ပုဂံခေတ်မြန်မာစာကဲ့သို့) ဖြင့်ရေးသားထားသော မားဇ်ဘာ့ဂ် ဂါထာမန္တန်များ) ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းများက ထပ်တိုးသိမြင်နားလည်မှုများကို ရစေနိုင်သည်။ ပညာရှင်များက အခြားသော အင်ဒို-ဥရောပလူမျိုးများ၏ ဒဏ္ဍာရီများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခဲ့မှုများသည် ယခုထက်များစွာ ပို၍စောသော ဒဏ္ဍာရီများနှင့်ပတ်သက်၍ အလားအလာရှိနိုင်သည့် ဒဏ္ဍာရီပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းများကိုဖြစ်စေခဲ့ကြသည်။
အလယ်ခေတ်၊ ဗိုက်ကင်းခေတ်၊ လူအများနယ်မြေရွှေ့ပြောင်း အခြေချသောခေတ် နှင့် ထိုခေတ်မတိုင်မီကာလများအတွင်း တည်ရှိခဲ့ကြသည်ဟု ယူဆနိုင်သော ဒဏ္ဍာရီဆန်သည့် ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ၊ ကဗျာများမှ အလွန်နည်းပါးသော ပမာဏသာလျှင် ရှင်သန်ခဲ့ကြသည်။ (၁၄)ရာစုက နော်ဝေးတွင် စုန်းအတတ်ပညာတတ်သာ်ဟု စွပ်စွဲခံရသော အမျိုးသမီး Ragnhild Tregagås အသုံးပြုသည်ဟူ၍ မှတ်တမ်းရှိခဲ့သော အလယ်ခေတ် မန္တရားတစ်ပုဒ်ကဲ့သို့သော ခေတ်သစ်ပိုင်းသို့ချဉ်းကပ်ရောက်ရှိလာသော နောက်ပိုင်းရင်းမြစ်များ နှင့် (၁၇)ရာစု အိုက်စလန်မှ (မှော်ပညာ) ဂါထာမန္တရားစာအုပ်များမှ ဂါထာမန္တန်များသည်လည်း ရံခါ၌ နော့စ်ဒဏ္ဍာရီအတွက် အကိုးအကားများဖြစ်စေသည်။ နတ်ဘုရားအမည်များရှိသော နေရာများကဲ့သို့သော အခြားသဲလွန်စများသည်လည်း နတ်ဘုရားများအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်လက်များပေးနိုင်ချေရှိသည်။ ဥပမာဆိုရသော် နတ်ဘုရားအမည်ပါရှိသော နေရာဒေသများအပေါ် အခြေခံဖြစ်ပေါ်လာသည့် နတ်ဘုရားများကြား အလားအလာရှိသော ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု၊ ထိုဒေသတွင်း၌ နတ်ဘုရားတို့၏ ကျော်စောမှုနှင့် ဘူမိသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများသည် ထပ်တိုးအချင်အလက်ပေးနိုင်သော သဲလွန်စများဖြစ်သည်။
အိုင်းဆစ်ယာနတ်ဘုရားများ ဘစ်ဗရော့စ်ခေါ်သော မီးတောက်နေသည့် သက်တန့်တံတားမှ မြင်းစီးဖြတ်သန်းစဉ် သော်နတ်ဘုရားက မြစ်ရေထဲမှ ဖြတ်းသန်းပုံ၊ Lorenz Frølich ၏ သရုပ်ဖော်ပုံ (၁၈၉၅)
နော့စ်ဒဏ္ဍာရီမှဖော်ပြချက်များ၏ အဓိကမှာ နတ်ဘုရားတို့၏ အကျပ်အတည်းဒုက္ခများ၊ ၎င်းတို့နှင့် အခြားသူများ(ဥပမာ ယော့တ်နာခေါ်တွင်သည့် လူထွားကြီးများ)၏ အချင်းချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်သည်။ ယော့တ်နာများသည် နတ်ဘုရားများ၏ မိတ်ဆွေ၊ ချစ်ခင်ရသူ၊ ရန်သူ (သို့) မိသားစုဝင်များဖြစ်နိုင်သည်။ ရင်းမြစ်စာပေများ၌ မြောက်များစွာသော နတ်ဘုရားများကို ဖော်ပြထား၏။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအမည်များ၊ နေရာဒေသတို့၏ အမည်များနှင့် ပတ်သက်သော မှတ်တမ်းများက သက်သေပြုသည်မှာ ဗိုက်ကင်းခေတ်အတွင်း စကန်ဒီနေးဗီးယားလူမျိုးတို့ကြား နာမည်အကျော်ကြားဆုံးသူမှာ သော်နတ်ဘုရားဖြစ်ကာ သော်သည် ရန်သူများအားမဆုတ်မနစ်လိုက်လံရှာဖွေ၍ ၎င်း၏လက်တွင် တောင်ဖြို မိုးကြိုးအစွမ်းရှိ မြောနစ်ယာတူလက်နက်ကိုင်စွဲထားသည်ဟူ၍ သရုပ်ဖော်ကြသည်။ သော်သည် နတ်ဘုရားတို့နှင့် လူသားများ၏ ရန်သူ ယော့တ်နာများကို အလုံးစုံ ဖျက်ဆီးခဲ့ကာ လှပချောမော၍ ရွှေရောင်ဆံနွယ်ရှိသည့် 'ဆစ်ဖ်' (Sif) (ရှေးဟောင်းနော့စ်အသံ - ဆီးဖ်) နတ်ဘုရားမနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။
အိုးဒင်နတ်ဘုရားကိုလည်း မကြခဏဆိုသလို ရှင်သန်ကျန်ရစ်သော စာများ၌ဖော်ပြကြသည်။ မျက်လုံးတစ်လုံးသာရှိကာ မြေခွေးနှစ်ကောင်၊ ကျီးနက်နှစ်ကောင် ခစားသော လက်တွင် လှံလက်နက်ကိုင်စွဲထားသည့် အိုးဒင်နတ်ဘုရားသည် ကမ္ဘာလောကများ(ကိုးခု)မှ အသိပညာဗဟုသုတများကို လေ့လာဆီးပူးသည်။ ၎င်းသည် လူသားများကို ရှေးဟောင်းဂျာမန်နစ်စာ/အက္ခရာ ချီးမြှင့်ပေးအပ်သူလည်းဖြစ်၏။ အဆိုပါ အက္ခရာစာနှင့်ပတ်သက်သော အသိပညာများရနိုင်စေခြင်းငှာ မိမိကိုယ်ကို စွန့်လွှတ်စတေးခံသည့် လုပ်ဆောင်မှုမှာ စကြာဝဠာသစ်ပင်ကြီးအစ်ဂ်ဒြာစီ၌ ကိုးရက်ကိုးည စောက်ထိုးမိုးမြော် ကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆွဲခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြကြသည်။ ဤနတ်ဘုရားသည် သေခြင်းတရား၊ အသိပညာဉာဏ်၊ ကဗျာလင်္ကာတို့နှင့် နီးကပ်ဆက်နွယ်သည်။ အိုးဒင်သည် နတ်ဘုရားတို့နယ်မြေ အဲဇ်ဂါ့ဒ် (Asgard) ကိုအစိုးရသူ၊ အိုင်းဆစ်ယာနတ်ဘုရား (Æsir or Aesir) တို့၏ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဇနီးသည် အစွမ်းအားကြီးသော ဖရစ်နတ်ဘုရားမဖြစ်၍ အနာဂတ်ကိုကြိုတင်မြင်သိနိုင်သည်သော်လည်း ထိုအကြောင်းများကို မည်သူမျှပြောဆိုခြင်းမရှိပေ။ အိုးဒင်နတ်ဘုရားနှင့်အတူ ချစ်လှစွာသော သားတော်တစ်ပါးရှိ၍ ဘော်လ်သရာ ဟုတွင်သည်။ ဘော်လ်သရာ သည် ဖြစ်တော့မည့်၎င်း၏ သေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အိပ်မက်များစွာ မက်၍ လိုကီက ၎င်းကိုသေစေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဟဲလ် (Hel) ဟုအမည်ရှိသော သူတစ်ဦးမှ အုပ်စိုးသော ဟဲလ်ဘုံတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။
အိုးဒင်နတ်ဘုရားသည် သေသောသူများဝေစုကို စွမ်းအားရှိနတ်ဘုရားမ ဖရွိုင်းယာ (Freyja)နှင့်အတူ မျှဝေရရှိသည်။ သူမသည် ချောမောလှပ၍ ပုရိသတို့ကို ကျစေသောအစွမ်းပိုင်းဆိုင်ကာ ငှက်မွှေးတောင်ဝတ်စုံကိုဆင်မြန်းရင်း ဆေးသရာ(seiðr) ဟုခေါ်သော မှော်အတတ်တစ်မျိုးကို ကျင့်ကြံ၏။ တိုက်ပွဲဆီသို့ မြင်းဖြင့်နှင်ကာ သေသောသူများကို လက်ခံရွေးချယ်ရန် ရောက်လာတတ်၏။ ထို့နောက် ရွေးချယ်ထားသောသူများကို သူမ၏တမလွန်ကွင်းပြင်(နယ်မြေ) ဖိုးလ်ဝမ်ဂရာ (Fólkvangr) သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဖရွိုင်းယာသည် ပျောက်ဆုံးနေသော ခင်ပွန်း အိုးသရာ (Óðr) အတွက်ငိုကြွေးကာ ဝေးသီခေါင်ဖျားဒေသများဆီထိ သွားရောက်ရှာဖွေသည်။ ဖရွိုင်းယာ၏ အကိုတော်သူ ဖရဲ့ယာနတ်ဘုရား(Freyr) ကိုလည်းဘဲ ဤရှင်သန်လျက် ရှိသော စာပေများ၌ ဖော်ပြတတ်ကြရာ ၎င်းသည် ရာသီဥတု၊ မင်းမျိုးမင်းနွယ်၊ လူတို့၏ လိင်ကိစ္စ၊ စိုက်ပျိုးရေးများနှင့် ဆက်နွယ်သောသူဖြစ်၍ လူလောကသို့ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ သာယာနာပျော်မှုများယူဆောင်ပေးသူလည်းဖြစ်သည်။ အလွန်လှပသည့် ယော့တ်နာမျိုးနွယ် ဂဲသရာ (Gerðr)ကို မြင်၍ အချစ်နာချုံးချုံးကျသဖြင့် ၎င်း၏အနာဂတ်ကံကြမ္မာကို စတေးအနစ်နာခံကာ သူမအချစ်ကို ရရှိရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။  ၎င်းတိုး၏ ဖခင်မှာ စွမ်းအားနှင့်ပြည့်စုံစော နျော့သရာနတ်ဘုရားဖြစ်ပြီး သင်္ဘော၊ ပင်လယ်ပြင်ခရီးသွားခြင်း၊ ရာသီဥတု၊ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောသူဖြစ်သည်။ ဖရဲ့ယာနှင့် ဖရွိုင်းယာတို့ဧ မိခင်မှာ နျော့သရာ၏ (အမည်မသိ) ညီမတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် နောက်ထပ်သိရှိရသော အချက်အလက်မှာ နျော့သရာသည် နှင်းလျောစီး၊ အမဲလိုက်နတ်ဘုရားမ စကားသီ (Skaði)နှင့် လက်ထပ်သည်ဟုလည်းဆိုသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးဆက်ဆံရေးမှာ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှပါ။ အကြောင်းကား စကားသီသည် ၎င်းချစ်သော တောင်တန်းများမှ မခွဲရက်မခွာနိုင်သလို နျော့သရာသည်လည်း ပင်လယ်ပြင်နှင့် မဝေးလိုလှပါ။ ဖရဲ့ယာ၊ ဖရွိုင်းယာနှင့် နျော့သရာ တို့သည် ဗားနစ်ယာ(Vanir) နတ်ဘုရားအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည်။ အိုင်းဆစ်ယာနှင့် ဗားနစ်ယာ နတ်ဘုရားများသည် ထင်ထင်ရှားရှားကွဲပြားသော်လည်း အိုင်းဆစ်ယာ-ဗားနစ်ယာတိုက်ပွဲကြီးပြီးနောက် ရလဒ်အဖြစ် အတူတကွပေါင်းစည်းကြသည်။
မြောက်များစွာသော အခြားနတ်ဘုရားများသည် ဖော်ပြခံရမှုနည်းပါးသော်လည်း ရင်းမြစ်စာပေများတွင် ပါဝင်ကြသည်။ အကြားရနည်းသော နတ်ဘုရားအချို့တွင် ပန်းသီးကိုင်ဆောင်ထားသော အိုင်းဒွန်နတ်ဘုရားမ(Iðunn)၊ သူမ၏ ခင်ပွန်း ကဗျာလင်္ကာနတ်ဘုရား ဘရာဂီ(Bragi)၊ ရွှေသွားပိုင်ရှင် ဟိမ်းဒါလာနတ်ဘုရား (ညီအမများဖြစ်သည့် အမျိုးသမီးကိုးဦးမှဖွားသည်ဟုဆို)၊ ရှေးနတ်ဘုရား တိုင်ယာ (Týr) (မြေခွေးကြီး ဖန်းနရာယစ်ယာ ကိုချည်နှောင်စဉ် လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။)၊ ဂက်ဖ်ယောန်နတ်ဘုရားမ (ယနေ့ခေတ် ဇီလန်(Zealand) နှင့် ဒိန်းမတ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သူ) စသည်တို့ပါဝင်ကြသည်။
နတ်ဘုရားများမဟုတ်သော အခြားသောသူများအကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ အက်လ်ဖ်များ၊ ဒွာ့ဗ်လူပုများ ကိုလည်းအများအားဖြင့် ဖော်ပြထားကာ ၎င်းတို့သည် ဆက်စပ်ဟန်တူသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကား သဲသဲကွဲကွဲမရှိလှဘဲ ထိုမျိုးနွယ်နှစ်ဦး၏ ပတ်သက်ဆက်စပ်မှုသည်လည်း မရေမရာ မပြတ်မသားသာဖြစ်သည်။ အက်လ်ဖက်များမှာ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါတောက်ပ၍ လှပချောမောကြကာ တစ်ဖက်တွင် ဒွာ့ဗ်လူပုများကား မြေကြီးသုံး၍ ပြုလုပ်ရာ၌ ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်။ အခြားအုပ်စုတစ်လည်းရှိသေးသည်။ ၎င်းတို့မှာ ယော့တ်နာ (jötnar)၊ (thursar) နှင့် ထရိုး (trolls) တို့ဖြစ်ကြရာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် ခက်ဆစ်အဖြစ် လူထွားကြီး/ဧရာမလူကြီး/လူ့ဘီလူး (Giants) အဖြစ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ဤအုပ်စုမှသူများသည် အကူညီလည်းပေးသည်။ အနှောက်ယှက်လည်းပေးသည်။ နတ်ဘုရားများကြား နေရာယူသော သူများလည်းဖြစ်ကြသည်။ ကံကြမ္မာစောင့် အပျိုစင်နတ်ဘုရားမများ (norns)၊ သရဲတစေဝိဉာဉ်ပုံစံရှိသော ဒီးစ်ဆီယာများ၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ဗဲလ်ကရီ စသည့်သူများသည်လည်း မကြာခဏဆိုသလိုဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အခန်းပါဝင်မှုများသည်ကား တူညီမှုရှိနိုင်သကဲ့သို့ ကွဲပြားမှုများလည်းရှိနိုင်သည်။ ဤသုံးမျိုးသည် ကံကြမ္မာနှင့် ပတ်သက်သော အမျိုးသမီးများသာဖြစ်သည်။
စကြာဝဠာသစ်ပင်ကြီး အစ်ဂ်ဒြာစီ ကို Friedrich Wilhelm Heine ၏သရုပ်ဖော်ပုံ (၁၈၈၆)
နေနတ်ဘုရားမ ဆိုလ် နှင့် လနတ်ဘုရား မားန်နီတို့ကို ဝံပုလွေ Sköll နှင့် Háti တို့ကလိုက်နေစဉ်၊ John Charles Dollman ၏ သရုပ်ဖော်မှု (၁၉၀၉)
နော့စ်တို့၏ စကြာဝဠာသဘော၌ သက်ရှိအားလုံးတို့သည် စကြာဝဠာသစ်ပင်ကြီး အစ်ဂ်ဒြာစီ၏ဘေးပတ်လည်၌ရှိသော ကမ္ဘာကိုးခု (ဘုံကိုးဘုံ)တွင် နေထိုင်ကြသည်။ နတ်ဘုရားများသည် အဲဇ်ဂါ့ဒ် ဟုခေါ်သော ကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ကာ လူသားများသည် မစ်ဂါ့ဒ် (Midgard) ခေါ်တွင်သည့် ဘုံတွင်ရှိကြ၍ ထိုဘုံသည် စကြာဝဠာအလယ်တွင်ရှိသော နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ နတ်ဘုရားများ၊ လူသားများ၊ ယော့တ်နာများအပြင် ဤကမ္ဘာကိုးခု၌ အက်လ်ဖ်များ၊ ဒွာ့ဗ်များလည်းနေထိုင်ကြသည်။ ကမ္ဘာအချင်းချင်းကြား ခရီးသွားမှုအကြောင်းကို ဒဏ္ဍာရီများ၌ ဖော်ပြပြောဆိုမှုများရှိရာ နတ်ဘုရားများနှင့် အခြားသောမျိုးနွယ်များသည် လူသားများနှင့် တိုက်ရိုက် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများရှိနိုင်သည်။ ယစ်ဂ်ဒြာစီသစ်ပင်ကြီး၌ မြောက်များစွာသော သက်ရှိသတ္တဝါများနေထိုင်ကြရာ၌ ရိုင်းပျတတ်သော သတင်းစကားသယ်ဆောင်သူ ရတ်တာတော့စ်ခ် ရှဉ့် (Ratatoskr) ၊ အပင်ကိုင်းထိပ်ဖျား၌ နားသော ဗက်သရာဖိုးနီယာ(Veðrfölnir) သိမ်းငှက် စသည့်အကောင်များပါဝင်သည်။ သစ်ပင်တွင် အဓိကအမြစ်ကြီးသုံးသွယ်ရှိ၍ ထိုအမြစ်တစ်ခု၏ အခြေ၌ နော်န်အမည်တွင်သော ကံကြမ္မာစောင့် အမျိုးသမီးသုံးဦးရှိသည်။ စကြဝဠာ၌ရှိသော အခြေခံအခြင်းအရာများကို ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်တင်စားကြကာ နေနတ်ဘုရားမ ဆိုလ် (Sól) ၊ လနတ်သား မားန်နီ (Máni : ဖာရိုးကျွန်းစု - မောယားနီ / အိုက်စလန် - မောင်းနီ) နှင့် ကမ္ဘာမြေနတ်ဘုရားမ ယော့သ်/ယားသ် (Jörð) တို့ဖြစ်ကြပြီး နေ့နတ်ဘုရား ဒဲဂရာ (Dagr) နှင့် ညနတ်ဘုရား နို့တ် (Nótt) တို့လည်းပါဝင်သည်။
နော့စ်ဒဏ္ဍာရီတွင် တမလွန်သည် ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စဖြစ်၏။ သေသောသူများသည် ဟဲလ်ခေါ်တွင်သော အမှောင်ထုလွှမ်းနယ်မြေသို့ သွားရနိုင်ကာ ထိုဘုံကို ဟဲလ် ဟုပင်ခေါ်တွင်သော အမျိုးသမီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အုပ်စိုးသည်။ ထိုသေသောသူများကို ဗဲလ်ကရီက ခေါ်ဆောင်၍ အိုးဒင်၏ တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ဆိုင်သော ဗဲလ်ဟဲလာ/ဗားလ်ဟားလား (Valhalla) ခန်းမဆောင်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဖရွိုင်းယာနတ်ဘုရားမ၏ ရွေးချယ်ခြင်းလည်း ခံရနိုင်ကာ ဖိုးလ်ဝမ်းဂရာ ကွင်းပြင်သို့ ရောက်ရှိကြသည်။ နတ်ဘုရားမ ရောင်း (Rán)သည်လည်း ပင်လယ်ပြင်၌ သေသောသူများ၏ ဝေစုရသည်။ ယော့ဖ်ယောန် နတ်ဘုရားမ (Gefjon) ကို အပျိုစင်များသေဆုံးရာတွင် လာရောက်ခစားရသည်ဟုလည်းဆိုကြသည်။ စာပေများသည် ပြန်လည်မွေးဖွားဝင်စားခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အကိုးအကားများလည်း ပေးထား၏။ အချိန်ကာလကို ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပျက်မှုသဘော(သံသရာ)နှင့် အဆင့်လိုက် တောက်လျှောက်ဖြစ်ပျက်မှုသဘော ဤနှစ်ခုကြားပုံစံဟု ဖော်ပြထား၍ ပညာရှင်များက ဒဏ္ဍာရီ၏ မူရင်းပုံစံမှာ သံသရာသဘောဖြစ်သည်ဟု ငြင်းခုံဆွေးနွေးကြသည်။ မြောက်များစွာသော စကြာဝဠာဖန်တီးခြင်းဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များသည် အိုက်စလန်ရင်းမြစ်များတွင်ပါရှိ၍ အနာဂတ်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ(Ragnarok)ပျက်ခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြစ်တည်ခြင်း အကိုးအကားများကို များသောအားဖြင့် အချို့သော စာများ၌ ဖော်ပြထားကြသည်။
အက်ဒါစကားပြေနှင့် အက်ဒါလင်္ကာကဗျာမှ Völuspá ကဗျာအရ ပထမဆုံးလူသားမောင်နှံသည် အားစ်ခ် နှင့် အမ်ဘလာတို့ဖြစ်ကာ ရေတွင်မြောနေသော သစ်တုံးမှ နတ်ဘုရားသုံးပါးကတွေ့ရှိ၍ လက်ဆောင်သုံးမျိုးဖြင့် ဘဝ၏အရည်အသွေးကို ပြည့်ဝစေသည်။ ရက်နရော့၏ ကပ်ဆိုးကြီးပြီးနောက် ဤဖြစ်စဉ်သည် တစ်ကျော့ပြန်လည်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုအခါ၌ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်မည်ဖြစ်သော မောင်နှံမှာ လိဗ် နှင့် လိဗ်သရာဆာ (Líf and Lífþrasir) တို့ဖြစ်၍ ထိုနှစ်ဦးသည် အသစ်ကမ္ဘာကို လူဦးရေတိုးပွားစေကာ ပြန်လည်စိမ်းစိုစေမည်ဖြစ်သည်။
မြောက်ဂျာမန်နစ်လူမျိုးများ၏ ဒဏ္ဍာရီများအကြောင်း ပြန်လည်ပြောဆိုသော ရှေးဟောင်းနော့စ်စာပေများအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေခြင်းများနှင့်အတူ နော့စ်နတ်ဘုရားများ၊ သူရဲကောင်းများအကြောင်းကိုးကားချက်များသည် ဥရောပစာပေယဉ်ကျေးမှုများ၌ ပြန့်နှံ့ခဲ့ကြရာရအထူးသဖြင့် စကန်ဒီနေးဗီးယားဒေသ၊ ဂျာမနီနှင့် ဗြိတိန်တို့ဖြစ်ကြသည်။ (၂၀)ရာစုနှောင်းပိုင်းအတွင်း နော့စ်ဒဏ္ဍာရီနှင့်ပတ်သက်သော အကိုးအကားများကို သိပ္ပံခေတ်လွန်နှင့် စိတ်ကူးယဉ်စာပေများ၊ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်များကို ရွေးချယ်ယူငင်၍ ဆော့ရသော ဂိမ်းများ (role-playing game)၊ ကာတွန်းရုပ်ပြစာအုပ်များ၊ ဂျပန်အန်နီမေးရှန်းဇာတ်ကားများ စသည်တို့၌ အသုံးတွင်ကျယ်လာခဲ့သည်။ ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သော သဲလွန်စများကို ဂီတနယ်ပယ်၌လည်း တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဂီတအမျိုးအစားလည်း ရှိကြသည်။ ဗိုက်ကင်းမက်တဲလ် (viking meta) ဟုခေါ်သည်။ ဂီတတီးဝိုင်များဖြစ်သည့် Amon Amarth ၊ Bathory နှင့် Månegarm တို့သည် နော့စ်ဒဏ္ဍာရီနှင့်ပတ်သက်သော သီချင်းများဖွဲ့ဆိုကြ၏။
↑ ဤယော့တ်နာများမှာ ရံခါ၌ လူထွားကြီးများဟု ဖော်ပြတတ်သလို ရံခါ၌လည်း ထိုကဲ့သို့ပုံစံမျိုးရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် အနက်ပေးသောအခါ Giant ဟုသာခြုံငုံ၍ ပေးတတ်ကြသည်။
↑ "အင်ဒို-ဥရောပ" ဟုရေးသားသောဝေါဟာရသည် အိန္ဒိယ-ဥရောပဟုသာဆိုလိုသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
↑ romanticism သည် ၁၈ရာစုအကုန် ၁၉ရာစုဆန်းတွင် အနုပညာ၊စာပေ၊ဂီတ ဉာဏဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်၍ ခံစားချက်၊ ပုဂ္ဂလဓိဌာန်ကျခြင်း လွတ်လပ်စွာဖော်ကျူးခွင့်... စသဖြင့်များကို အလေးပေးသော ဝါဒ/လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်
↑ Rooth၊ Anna Birgitta (1961)။ Loki in Scandinavian Mythology။ C. W. K. Gleerup။
↑ Lindow၊ John (1997)။ Murder and vengeance among the gods: Baldr in Scandinavian mythology, Edition 262။ Suomalainen tiedeakatemia။ ISBN 9514108094။
↑ Lindow၊ John (1988)။ Scandinavian Mythology: An Annotated Bibliography။ Garland Pub.။ ISBN 0824091736။
↑ Murdoch၊ Brian; Hardin၊ James N.; Read၊ Malcolm Kevin (2004)။ Early Germanic Literature and Culture။ Boydell & Brewer။ p. 98-99။ ISBN 157113199X။ Of even more importance is Snorri Sturluson, the Icelandic scholar and politician, who did our knowledge of heathen religion such good service... he offersascholarly portrayal of Old Norse mythology, which is admittedly heavily influenced by his Christian education and classical education, but remains nonetheless our most important medieval source for North Germanic mythology.
↑ Colum၊ Padraic (2012)။ Nordic Gods and Heroes။ Courier Corporation။
↑ ၆.၀ ၆.၁ Faulkes (1995), pp. vi–xxi, and Turville-Petre (1964), pp. 1–34.
Edda။ ဘာသာပြန်သူ Faulkes၊ Anthony။ Everyman။ 1995။ ISBN 0-460-87616-3။ CS1 maint: ref=harv (link)
Flowers၊ Stephen (1989)။ The Galdrabók: An Icelandic Grimoire။ ISBN 0-87728-685-X။ CS1 maint: ref=harv (link)
Lindow၊ John (2001)။ Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs။ Oxford University Press။ ISBN 0-19-515382-0။ CS1 maint: ref=harv (link)
MacLeod၊ Mindy; Mees၊ Bernard (2006)။ Runic Amulets and Magic Objects။ Boydell Press။ ISBN 1-84383-205-4။ CS1 maint: ref=harv (link)
Mallory၊ J. P. (2005)။ In Search of the Indo-Europeans: Language, Archaeology and Myth။ Thames & Hudson။ ISBN 0-500-27616-1။ CS1 maint: ref=harv (link)
Orchard၊ Andy (1997)။ Dictionary of Norse Myth and Legend။ Cassell။ ISBN 0-304-34520-2။ CS1 maint: ref=harv (link)
Puhvel၊ Jaan (1989)။ Comparative Mythology။ Johns Hopkins University Press။ ISBN 0-8018-3938-6။ CS1 maint: ref=harv (link)
Turville-Petre၊ E. O. G. (1964)။ Myth and Religion of the North: The Religion of Ancient Scandinavia။ Holt, Rinehart and Winston။ CS1 maint: ref=harv (link)
Simek၊ Rudolf (2007)။ Dictionary of Northern Mythology။ ဘာသာပြန်သူ Hall၊ Angela။ D.S. Brewer။ ISBN 0-85991-513-1။ CS1 maint: ref=harv (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နော့စ်ဒဏ္ဍာရီ&oldid=704361" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၃၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။